Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Basa Kuchinja Kwemamiriro ekunze Kunotamba Zvino mukuwedzera kweAllergy Rates
Ongororo ichangoburwa inoratidzira mupiro we synergistic wekushanduka kwemamiriro ekunze uye kusvibiswa kwemhepo kune allergic kufema zvirwere.
Kuchinja kwemamiriro ekunze, kunoratidzwa nekukwira kwetembiricha, kusvibiswa kwemhepo, mafashamo anoparadza, uye kusanaya kwemvura kwakanyanya, kuri kukanganisa mamiriyoni evanhu pasi rose. Kuwedzera kwehuwandu hwekusvibiswa-kwakabatana nekufema allergies senge asthma, rhinitis, uye hay fever mumakore achangopfuura inogona kukonzerwa nemhedzisiro yekushanduka kwemamiriro ekunze. Nekudaro, kunyangwe mhedzisiro yekukwira kwematembiricha uye kusvibiswa kwemhepo pazvirwere izvi zvekusawirirana zvakadzidzwa, ongororo yakazara yemabatiro anoita zvinhu izvi kune mumwe nemumwe yanga isati yavepo.
Muwongororo yakaburitswa muChinese Medical Journal musi wa5 Chikunguru 2020, vaongorori vakapfupikisa kuomarara kwekuchinja kwemamiriro ekunze, kusvibiswa kwemhepo, uye zvinofambiswa nemhepo senge pollen uye spores synergistically inobatsira kuzvirwere zvekufema. Vanokurukura kuti kushanduka kwemamiriro ekunze, kusanganisira kupisa kwakanyanya, kunogona kukanganisa zvakananga nzira yekufema uye kukonzera zvirwere. Pamusoro pezvo, ivo vanosimbisawo basa renjodzi dzinongoitika dzoga semabhanan'ana, mafashama, moto wemusango, uye madutu eguruva mukuwedzera chizvarwa uye kuparadzirwa kwezvinhu zvinotakurwa nemhepo uye kudzikisa kunaka kwemhepo, zvichikanganisa hutano hwevanhu. Pfupiso yechinyorwa inoratidzwa muvhidhiyo paYouTube.
Pakazere, ongororo iyi inoyambira pamusoro penjodzi dzinongoitika dzehutano mune ramangwana nekuda kwekudzoreredza uye kuwanda kwemhedzisiro yekupisa uye zvinotakurwa nemhepo pane kusvibiswa kwemhepo. "Mafungiro edu anoratidza kuti mazinga echinhu uye ozone mumhepo achawedzera nekudziya kwemamiriro ekunze, uye kukwira kwekushisa uye CO2 mazinga anogona kusimudza mazinga ezvinokonzerwa nemhepo, zvichiwedzera njodzi yezvirwere zvekufema," anodaro Prof. Cun-Rui Huang, akatungamirira chidzidzo chacho.
Pamwe chete, chirevo ichi chinoshanda sekudaidzira-ku-chiito chekutsvagisa, kusimudzira, uye kusimudzira kuedza kubva kuvashandi vehutano, vachiisa hwaro hwemazano anoshanda ehutano hweveruzhinji. “Matanho akareruka ekuronga madhorobha senge kugadzira nzvimbo yakadzikira yekusvibiswa kwemhepo yakatenderedza nzvimbo dzinogara vanhu, kudyara zvidyarwa zvisina allergenic, uye kuchekerera hedge kusati kwatumbuka kunogona kuderedza kuratidzwa kwechepfu uye kuderedza njodzi dzehutano. Kuongorora mamiriro ekunze uye hurongwa hwekunyevera hunogonawo kubatsira zviremera kuchengetedza vanhu vari munjodzi vakadai sevagari vemumaguta nevana kubva kuzvirwere zvakadaro,” vanotsanangura kudaro Prof. Huang, vachiwedzera kuti nzira dzakadai dzichave dzakakosha mukuderedza kukanganiswa kwehutano hwezvirwere zvekufema mune remangwana.
Chokwadi, kushanda pamwe chete kunodiwa kuchengetedza kodzero yemunhu yekufema mweya wakachena.